Tsamba yeKutsvaga yeAmazon, Akaunti Yevatengesi Yakamiswa, Chirongwa Chekuita
Wako Amazon Kukwidza Muongorori
Maitiro Ekunyora Akabudirira Amazon Kukwidza Tsamba uye Chirongwa Chekuita?
Ingo tanga iyo Live Chat nesu izvozvi kana zadza online fomu yekubvunza pazasi uine ruzivo rwako uye ipapo mupi wezano wedu anodzoka muawa. Taura nesu kuti titore tsamba yakakwana yeAmazon Suspension Appeal.
Wona MaSevhisi Edu
Nzwisisa Nei Amazon Mutengesi Akaundi Yakamiswa!
Kuziva chikonzero chekumiswa kweakaundi ndiyo nhanho yekutanga yekuita kuti iyo account itangezve. Kutsvaga dambudziko kunoda ruzivo rwehunyanzvi hwemunda Yedu Seller account nyanzvi dzichakubatsira iwe kuti uwane iyo honzeri yekumiswa kwako uye tsanangura mabatiro atinogona kukubatsira iwe kunyora akakwana Tsamba yeKutsvaga yeAmazon. Taura nesu izvozvi uye tora Chichemo chako ASAP.
Isu Takazaruka Maawa makumi maviri nemana pazuva, Mazuva manomwe pavhiki.
Bhuka Yemahara Kubvunzana
Vanachipangamazano Vanodzoka mu1 Hora
Ndingaite sei kuti kudzivirira kumiswa uku kusaitike mune ramangwana?
Iwe unofanirwa kufungisisa nezvazvo kuti iwe unodzivirira sei izvi kuti zvizoitika zvakare mune ramangwana. Amazon ichatarisira kuti iwe unofanirwa kuita chero marongero ekuita uye dzimwe nguva ivo vanongo dzoreredza yako Amazon Mutengesi Akaunti kana iwe uchinge wagona kuratidza kuti waita chako chiitiko chehurongwa.
Kana iwe uchida rubatsiro kukwezva yako Amazon mutengesi account, kana kune rimwe divi kana iwe uchida kuona kuti ndeapi mikana yako yekudzoreredzwa, tinogona kubatsira. Taura nemumwe wevamiriri vedu kuti unzwe kubvunzana kwemahara uye nehunyanzvi maonero nezvenyaya yako.
Tinogona zvakare kukubatsira iwe kukwidza kana rondedzero yako ikamiswa uye kana paine kutyorwa kwemitemo kungave kuri kukanganisa yako account account! Taura nemumwe wevamiriri vedu vekutarisira vatengi kuti ubvunze mahara.
tora Akaimiswa yako Akaunti yeAmazon Yakadzorerwa mukati maawa makumi maviri nemana
Kunyange zvichitora chinguva kuti yako amazon mutengesi account imiswe, kuita kuti iyo account idzorerwe inogona kuita nguva inopedza. Dzimwe nguva, nguva ino inowedzerwa nekuda kwekumwe kukanganisa pano neapo kunoitwa nemutengesi nekuda kwezvikonzero zvakasiyana sekusanzwisisika mumitemo yeAmazon, kutadza kuona izvo zviri kumashure Amazon account kumiswa, kana kusakwanisa kunyora yakajeka yakatemwa uye nyanzvi Amazon kumiswa kukwidza tsamba. Isu tinonzwisisa aya matambudziko zviri nani kupfuura chero munhu uye ndosaka tichivimbisa sevhisi yemhando yepamusoro munguva inokurumidza kwazvo.
Aplus Global eCommerce imwe-yekumira mhinduro yeiyo yakazara-yakazara resolution yezvako zvichemo zveKukwidza uye nezvimwe. Iyo nguva inogona kubva kubva kumaawa makumi maviri nemana kusvika maawa makumi maviri nemaviri zvichienderana nekuoma kwedambudziko.
Ndingaite Sei kuti Ndisasunungure account yangu yeAmazon?
Kuhaya mumwe munhu kwakanak asi iwe unogona kuteerera kuziviso yakatumirwa neAmazon, uye nekuuya neChirongwa Chekuita. Izvi ndizvo zvisikwa zvepamoyo zvekukwezva kwakanaka.
Zvinotora nguva yakareba sei kunyora tsamba yekumisa kukwidzwa?
Iyo ipfupi nguva inotora kunyora kukwidza maawa makumi maviri nemana. Iyi nguva inogona kukwira kusvika pamazuva ebhizinesi matatu kusvika matatu sekuenderana nechero imwe yakamiswa amazon account uye nemhando yebasa rakakumbirwa nemutengesi.
Chii chaungaite kudzoreredza yangu Amazon Mutengesi Akaundi?
Kune akasiyana masevhisi uye mapakeji isu atinopa ekudzosera iyo Amazon mutengesi account. Isu tinopa kubvunza, amazon yekukumbira tsamba kutumira uye yekutevera masevhisi; zvinoenderana nemhando yepakeji iwe yaunosarudza.
Wakatove wakashanda paAmazon Mutengesi akamisa kesi?
Ehe, isu tashanda pamwe nezviyero zvemakesi akasiyana akanangana ne Amazon Akaunti Kumiswa. Zvakare, isu tine timu yevakarwa muhondo iyi.
Ko kana Amazon ikakumbira rumwe ruzivo?
Isu tinobata kukwidza kudzamara yasvika pachinangwa chayo- ndiko kudzoreredzwa. Mushure mekuchaja iwe kamwe chete, tinoshanda padanho rega rega rezviitiko kudzamara nyaya dzese dzagadziriswa.
Kudzoreredzwa kweakaundi kunovimbiswa here?
isu, semubatsiri, tinopa yakanakisa ongororo uye kukwidza kudzoreredza iyo yakamiswa amazon mutengesi account. Hatigone, zvakadaro, kudzora zvinhu kubva kumagumo eAmazon uye kudzoreredza account haina 100% yakavimbiswa. Asi, isu takaramba takabudirira chiyero chinopfuura 98% kusvika zvino.
Isu tinopa garandi yekudzoserwa mari?
Isu hatifarire kudzosa mari-kumashure asi panogona kuve nemamiriro ezvinhu eano novel kwatinozvifunga. Kuti uwane rumwe ruzivo verenga edu ekudzosera marongero.
Chii chako chebudiriro rate maererano neAmazon Appeal Service?
Nekutenda, Kusvika parizvino isu takachengetedza chiyero chebudiriro chakakwira kana chakaenzana ne98%. Isu tanga tichiita zvakanaka uye zvakare tine 90% yevatengi yekuchengetedza mwero nekuda kwekugutsikana kwevatengi.
Aplus Global Amazon Inoteterera Tsamba
Akaundi yangu yevatengesi yeAmazon yakamiswa, saka ndakabata A Plus Global Amazon kuti ndibatsire kunyora chirongwa chekuita kukwidza kubviswa.... ndakaenzanisira kuaccount yangu ndikataura nyaya dzandakanga ndasangana nadzo ndisati ndadzimwa. Pamwechete, chiitiko chakanakisa, vainditeerera uye vaindifambisa nenzira yekuita kuti account yangu ivandudzwe. Ini ndangosimbiswa mazuva maviri apfuura! Saka masevhisi avo anoshanda zvechokwadi!verenga zvakawanda
Mushure mekuuya nechangu chikumbiro, ini ndinotumira 4-5 POA uye hapana rombo rakanaka. Ini ndanga ndichifunga zvekugadzira iyo nyowani Amazon account sezvo ini ndaisakwanisa kudzorera account yangu kumashure. Funga zvako, ini ndichine mari yakavharwa... kumusoro neAmazon uye ivo vaisazopindura kune chero chekukumbira kwangu. . Ndakatora ngozi ndikati zvimwe ndinovabhadhara ndodzosera account yangu zvakare uyezve ndadzorerwa mari dzangu kana kuti ndinovabhadhara ndorasikirwa nemari ndobva ndarasikirwa neakaundi yangu nemari. Mushure memwedzi miviri yekumiswa ndakabhadhara izvi kambani kuti indibatsire kudzorera account yangu. Ivo vanonyatso kuendesa POA uye zuva rakatevera ndakawana email inoti "Yako Amazon account ikozvino yagadziriswa" Basa ranyatsoitwa uye ini zvirokwazvo NDINOGONESESA Aplus Global! Kana iwe uchida kuti account yako idzorerwe kana kuitwazve, usaite zvakafanana kukanganisa ini akaita. Tora nyanzvi yekunyora POA iwe.verenga zvakawanda
09:27 29 Chivabvu 21
Ivo vakanaka pane izvo zvavanoita. Ndakavashandisa kubatsira kuti account yangu yevatengesi yeAmazon ivandudzwe, uye zvakatora nguva, asi havana kumbokanda mapfumo pasi paakaundi. Vakanyora zvikumbiro kwandiri kusvikira ndave... yakagadzirwazve. Kugadzirisazve kwangu kwakatora mwedzi miviri nehafu, asi ndine shamwari yakashandisa sevhisi iyi zvakare ikadzorera account yake mumazuva mashoma chete. Zvakanyanya kukurudzira!verenga zvakawanda
08:26 05 Chivabvu 21
Ndiri kufara kwazvo kushanda navo. Yakanyanya kukurumidza sevhisi uye yavo yekukumbira tsamba inoshamisa. Varume ava vanoziva zvinodiwa amazon. Ndatenda!!
Mary Nyasha Landingin
11:07 03 Chivabvu 21
Ini ndashanda nekambani iyi mamwe maakaunzi zana uye vanodzorera mazhinji acho. Iwo akanaka kwazvo Kukwazisa tsamba sevhisi inopa muchidimbu. Ini ndicharamba ndichishanda navo.
06:17 03 Chivabvu 21
Mhoro! Ini ndoda kukuudza: Akaundi yangu yagadziriswa! Ndatenda zvikuru nerubatsiro rwenyu! Ndichakurangarira.
19:24 17 Kubvumbi 21
Zvakanakisisa mubhizinesi. Mushure mekuhaya basa ravo uye nekucherechedza zvavakaitira account yangu. Ndinofanira kutaura kuti ndinotenda kuti hapana chavasingakwanise kugadzirisa. Varumbidze kune chero munhu ane matambudziko ne... account yemutengesi. Kurumidza kutora matanho uye mhedzisiro inokurumidza!verenga zvakawanda
23:34 09 Kubvumbi 21
Ndingakurudzira kambani iyi kunyora chero maAmazon Tsamba Tsamba sezvavanoziva izvo zviri kutsvakwa neAmazon. Ndakaita research yemamwe makambani ndokusarudza iyi sezvo vakaita nguva yekutaura neni... nezve account yangu. Ini ndaifunga chaizvo kuti ndaizofanira kumirira 90+ mazuva ekuti ndiwane mari yekuburitswa uye kuti account yangu imiswe zvachose. Ndatenda APlusGlobal nekunyora tsamba yangu yekukumbira nekukurumidza uye nehunyanzvi. Ini ndinokurudzira zvikuru kuhaya nyanzvi nguva yekutanga iwe kukwidza nyaya yako. Iyi kambani yakandibatsira kuti account yangu iitwe basa zvakare zuva rimwe chete randakakwidza account yangu netsamba yavo yekukumbira. Izvo zvaive zvakagadzirirwa nyaya yangu. Ndatenda nebasa rakakura!verenga zvakawanda
05:02 07 Kurume 21
Vanhu @ APlus Global Ecommerce vakanaka chaizvo uye vanobatsira. Une nhoroondo yakazara yekutariswa uye wakatova nekunzwisisa kukuru kubva kwavari maererano neshanduko dzinoda kuitwa. Uye fungidzira chii, icho... kwakavandudza kutengesa kwangu zvakareverenga zvakawanda
04:58 07 Kurume 21
APlus Global Ecommerce mubatsiri mukuru webasa rekukumbira kweAmazon. Ndakadzoreredza account yangu mukati me72 hrs yekurambidzwa.
15:58 06 Kurume 21
APlus Global Ecommerce Inonunurwa mumaawa maviri uye yakadzorerwa neAmazon ipapo. Chaizvoizvo chakanakisa. Yakakodzera peni imwe neimwe. Yangu kuraira ndeyekuti usatarise pamutengo weti kana iwe uchida mhedzisiro... zvakakwana. Mushure mekutenga kutaurirana kuri kukurumidza, ini ndaive nerugwaro mukati maawa maviri uye acoount yakaburitswa mune isingasviki maawa makumi maviri nemana. Ini ndaive neakaundi yakavharwa kweinopfuura mwedzi mishanu. Ini ndinokurudzira zvikuru.verenga zvakawanda
18:21 16 Ndira 21
Wakawana account yangu yakadzorerwa mumaawa asingasviki makumi maviri nemana, ini ndichamukurudzira kune chero munhu, mira kubhadhara vanhu uye enda nenyanga dzenzou hes zvakanak kuita kukwidza! Ndokutenda zvikuru